पहिलोपटक कपिलवस्तुमा स्टार्फ नर्समा पनि देखियाे काे*राेना संक्रमण – Online Nepal
पहिलोपटक कपिलवस्तुमा स्टार्फ नर्समा पनि देखियाे काे*राेना संक्रमण
May 12, 2020 251
कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितमध्ये एकजना स्वास्थ्यकर्मी भएको बताइएकाे छ । कपिलवस्तुमा आज भेटिएका ८ कोरोना संक्रमितमध्ये एकजना स्वास्थ्यकर्मी भएको बताइएकाे हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना रिपोर्टमा कपिलवस्तुकी एक २५ वर्षीया युवती कोरोना संक्रमित भनिएको छ । ती कोरोना संक्रमित युवती कपिलवस्तु अस्पताल तौलिहवाकी स्टार्फ नर्स भएको बताइन्छ ।
संक्रमित स्टाफ नर्सलाई कपिलवस्तु नगरपालिका–२ स्थित महेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा राखिएको रिपोर्टमा देखाइए पनि उनी आफनै घरमा कोरेन्टाइनमा बस्दै आएकी छिन । स्टाफ नर्समा कोरोना देखिए अस्पतालमा रहेका सबै जना नै क्वारेनटाइनमा बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपालमा हालसम्म १७ जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । मंगलबार एकै दिन ५७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । जम्मा एक सय ९१ जनामा मा संक्रमण देखिएकोमा ३३ जना निको भइसकेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै संक्रमित पर्सा जिल्लामा छन् । जहाँ संक्रमितको संख्या ६४ पुगेको छ । मंगलबार मात्र ३९ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । उदयपुरमा ३२, कपिलवस्तुमा २९, बाँकेमा २४, रुपन्देहीमा १६, काठमाडौंमा पाँच तथा कैलालीमा चार जनामा संक्रमण भेटिएको छ ।
केही समयअघि धनुषामा कार्यरत नर्स दुर्गा शर्माले यसरी आफ्नाे व्यथा पाेखेकी थिइन् । त्यस्तै वीरगञ्जमा भेटिएका ३९ जना कोरोना संक्रमितमध्ये चार जना पत्रकार भएको पाइएको छ । लकडाउनको समयमा पनि पत्रकारहरु फिल्ड रिपोर्टिङमा खटिएका छन् । नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले संक्रमित पत्रकारको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाएका छन् ।
Prevभारतबाट करिब ८० हजार मान्छे नेपाल आउने तयारीमा
Nextबाँकेको कोहलपुर ३० जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ, ज्यान मा’र्ने ध’म्कीपछि स्वास्थ्यचौकी बन्द
आमाको मिर्गौला फेरिएकी अभिनेत्री आचार्यमा कोरोना थपिएर मृत्यु, के मृत्यु बारे पहिले थाहा थियो ?
ज्योतिष शास्त्रः पर्समा च्यातिएको पैसा राख्दा छाउँछ दरिद्रता, के के राख्नु हुँदैन ?
सिंगो भारतलाई एक्लै हल्लाउने नेपाली छोरी मनिषा कोइरालाको यो गर्विलो इतिहास भारतियले पढ्नु